Andramasina – Alatsinainy Bakaro : tratran’ny polisy ilay lehilahy misandoka ho mpiasan’ny kaominina | NewsMada
Andramasina – Alatsinainy Bakaro : tratran’ny polisy ilay lehilahy misandoka ho mpiasan’ny kaominina
Par Taratra sur 28/10/2017
Noraisim-potsiny tao amin’ny fananan-tany eny Anosy, ny alarobia 25 oktobra 2017 lasa teo ny lehilahy iray 52 taona voarohirohy ho nisandoka ho mpiasan’ny kaominina any Andramasina Alatsinainy Bakaro…
Ny polisy ekonomika no nahasambotra ity lehilahy raindahiny amin’ny fisolokiana ity. Voarohirohy ho manao fisandohana andraikitra sy mampiasa taratasy hosoka momba ny fananan-tany izy. Araka ny fanazavan’ny polisy, tonga nametraka fitoriana teny amin’ny polisy ny olona iray avy any amin’iny faritra Andramasina Alatsinainy Bakaro iny fa misy olona manao taratasy hosoka momba ny tany any amin’izy ireo. Nampiantsoin’ny tao amin’ny fananan-tany ilay mpisoloky mba hiaraka hivory amin’izy ireo ka nosamborin’ny polisy avy hatrany. Fantatra nandritra ny fanadihadiana fa misandoka ho mpiasan’ny kaominina Alatsinainy Bakaro izy io ary tsy mpiasan’ny fananan-tany any an-toerana ihany koa. Mampiasa fitombokase sandoka amin’ny anaran’ny kaominina Alatsinainy Bakaro izy. Nilaza koa izy nandritra ny fanadihadian’ny polisy fa hoe “diplômé d’Etat” amin’ny resaka fananan-tany. Tratra tany aminy nandritra ny fisavan’ny polisy ny kara-panajariana ny tany izay entiny nisolokiana ireo tantsaha any an-toerana. Miisa 140 ireo olona efa voasolokiny ka hakany vola 3 hetsy Ar ny tanimbary ary 5 hetsy Ar ny tanety isan’olona, araka fanampim-panazavana nomen’ny polisy.
Efa tamin’ny taona 2014 no nanombohany ity asa fisolokiana ity tao amin’ny kaominina Alatsinainy Bakaro. Lasa lamaody indray tato ho ato ny fisian’ireo andian’olona misoloky tany sy mampiasa fitombokase hosoka amin’ny anaran’ny fanjakana toy izao.